Ọrịa ogbu ogbu na nkwonkwo. Ọgwụ Ahụike Na Ahụike | Ọkọwa Okwu Ahụike
2 Rheumatism na Ọrịa ogbu na nkwonkwo
3 Thedị ọrịa ogbu na nkwonkwo bụ:
Agụrụ m ebe na-adịbeghị anya ebe ndị America mefuru 120 ijeri dollar kwa afọ iji gwọọ ọrịa ogbu na nkwonkwo, na-enweghị ọgwụgwọ otu onye na-agwọ. Ihe kachasị mma ị nwere ike ịtụ anya ya bụ ọgwụ iji kpuchie ntakịrị ihe mgbu ị na-enwe, mana ọ gaghị adị etu ahụ.
Mama m bụ nnukwu onye na-esi nri ma nwee ike ịme ihe ọ bụla ụtọ, mana akwụrụ m ụgwọ jọgburu onwe ya nri na ọtụtụ mmadụ ga-anwụ maka ya. M ka na-echeta mgbe m dị ọnwa itoolu ma ihe m na-echeta bụ ihe mgbu. Amaghị m otu ụbọchị n’enweghị ihe mgbu ka m na-etolite. Ihe mgbu m dị oke njọ nke na anaghị m enwe ike ihi ụra, n'ihi ya kwa, ụra anaghị ebu m. Enwere m ọrịa ogbu na nkwonkwo, fibromyalgia, ọnya afọ na-agba ọbara, ụkwara nta, na ọrịa siri ike na-efe efe ọ dịkarịa ala otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'afọ.
Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, m nwere ụzarị ahụ zuru oke na dọkịta, mgbe o gosichara m-ụzarị ahụ, gwara m na enwere m okwu ikpe kachasị njọ nke ọrịa ogbu na nkwonkwo ọ hụtụrụla - ọ na-ahapụ ọnya na ọkpụkpụ niile na ahụ m.
O nwere ike ịbụ nhụjuanya nke m mere kpatara agụmakwụkwọ m ji edozi ahụ ike. M na-ewere iwu tupu mahadum ahụ wee mee nri Nutrition 101 dị ka klas nzacha. Isi okwu m gụsiri m agụụ ike. Agbasoro agụụ m wee gbanwee isi m ka ọ bụrụ ihe oriri, nke m nwere ọ Iụ na m mere n'ihi na ọ bụghị naanị na m nwere ike ịgwọ ọrịa ogbu na nkwonkwo na nsogbu ahụike ndị ọzọ na-egbu mgbu, enyerela m aka karịa ndị 1,000 gbakere n'ọrịa kansa.
Rheumatism na Ọrịa ogbu na nkwonkwo
Rheumatism bụ oge eji eme ihe iji kọwaa ọtụtụ ọnọdụ mgbu nke akwara, akwara, nkwonkwo na ọkpụkpụ.
Ọrịa ogbu na nkwonkwo bụ ọnọdụ nkịtị na-akpata mgbu na mbufụt (nkwonkwo) nke nkwonkwo na ọkpụkpụ. Ihe mgbaàmà nke ọrịa ogbu na nkwonkwo gụnyere:
Amachibidoro mmegharị ahụ
Mbufụt na ọzịza
Ikpo anụ na-acha uhie uhie ma na-acha ọbara ọbara n’elu nkwonkwo
Thedị ọrịa ogbu na nkwonkwo bụ:
ọrịa ogbu ogbu na nkwonkwo
Osteoarthritis bụ ụdị ọrịa ogbu na nkwonkwo na-ahụkarị. N’ebe ndị mmadụ metụtara ọrịa ogbu na nkwonkwo, ihe na - eme ka mọki nke dị n’ọkpụkpụ ha wee jiri nwayọ na - ala n’ihu, na - eduga n’ọkpụkpụ ọkpụkpụ na - egbu mgbu na nkwonkwo. Nkwonkwo akachasị emetụta bụ n'aka, spain, ikpere na hips.
Ọrịa osteoarthritis na-etolitekarị na ndị mmadụ karịrị afọ 50. Agbanyeghị, ọ nwere ike itolite n’ọgbọ ọ bụla n’ihi nri, nsonye nsị, mmerụ ahụ ma ọ bụ ọnọdụ ejikọtara ọnụ.
Ọrịa ogbu na nkwonkwo na-amalitekarị n’agbata afọ 40 na 50. Ndi nwanyi kariri okpukpu ato karia ndi mmadu n’enwe nsogbu ha kariri ndi nwoke. Ọ bụ ụdị ọrịa ogbu na nkwonkwo jọgburu njọ karịa ọrịa osteoarthritis.
A kwenyere na ọrịa ogbu na nkwonkwo na-eme mgbe usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ọgụ ma bibie nkwonkwo ndị emetụtara, na-akpata ihe mgbu na ọzịza, ma ọ bụ acid sitere na nri na oke nsị na-ebubata ya ma bibie nkwonkwo ahụ.
Mgbe ụfọdụ eserese bara uru puku okwu - tinye anụ ọkụkọ na otu lita coke n'otu ntabi anya ma echi ya ọkpụkpụ ga-agbanwe ka roba.
Acid sitere na nsị gburugburu, nri na ihe ọ drinksụ drinksụ (dị ka sodas) jiri nwayọọ nwayọọ gbazee ọkpụkpụ na anụ ahụ na - ejikọta, na-apụ Ọkpụkpụ na-ete ọkpụkpụ na ogwe nke kristal nke acid di n’etiti ha, otutu ihe dika sandpaper. Nke a doro anya bụ ọnọdụ na-egbu mgbu.
Etoro m n’ugbo ezì na mmiri ara ehi. Anyị na-eri anụ ezi anụ ụlọ toro ogologo oge ihe dị ka ụbọchị ọ bụla, mgbe ụfọdụkwa, ọ na-eri ihe ugboro abụọ ma ọ bụ ugboro atọ n'ụbọchị. Enwere m mmiri ara ehi, ude, bọta, chiiz na chiiz ụlọ m nwere ike ịchọrọ. Mama m bụ onye a ma ama maka ịme achịcha na itinye mkparị na mmerụ ahụ, kwa ụbọchị enwere m achịcha e ghere eghe, na-apụta ma na-enwekarị oge okomoko dị ka ube ahihia dị mkpirikpi, achịcha achịcha, painiapulu achara, wdg.
Ndị nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo na ọrịa ndị ọzọ acid na-akpata aghaghị ime ụfọdụ mgbanwe ndụ ha.
ShopFreeMart Pure Magnesium, D-Cal, Vitalize na Siaga, na-akwado nkwonkwo ahụike ọ bụla nwere ike inye aka belata ụfọdụ mgbaàmà ọrịa ogbu na nkwonkwo, gout na rheumatism.
Gịnị Bụ Ọrịa ogbu na nkwonkwo (RA)
Nnyocha osteoarthritis na ụdị òké progeria na-ekpughe njikọ nkwanye ọgwụgwọ
Ntughachi ubu zuru oke - ụzọ kachasị mkpa nke uru?
Ihe na ogbu na nkwonkwo, Osteoarthritis, Rheumatism, Arthritis Rheumatoidakpado ogbu na nkwonkwo, osteoarthritis, rheumatism, ọrịa ogbu ogbu na nkwonkwo
3 echiche on "Ọrịa ogbu ogbu na nkwonkwo. Ọgwụ Okike Dị Mkpa na Ọgwụ"
Pingback: Ihe oriri iji zere - Ọkọwa Okwu Ahụike
Pingback: Mmiri Ngwọta Kpoo Eluigwe na Ala - Ọkachamara Ahụike Ahụike